ယောက်ျားပီသချင်သူတွေအတွက် Fashion အကြံဉာဏ်လေးများ – Gentleman Magazine
ယောက်ျားပီသချင်သူတွေအတွက် Fashion အကြံဉာဏ်လေးများ
ဒီအဝတ်အစား၊ ဒီဆံပင်ချည်း နေ့တိုင်းမြင်နေရရင် သင့်ပုံစံဟာ ပျင်းစရာ ကောင်းလာမှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ တခြားတစ်ကောင်က နည်းနည်း တောက်တောက်ပပ ဝတ်စားလာရင် ကောင်မလေးတွေအားလုံးက သူ့ကိုပဲ အရေးပေးမှာပေါ့။ အဲလိုကြုံရလို့ မခံချိမခံသာ ဖြစ်ဖူးပါသလား။
ယောက်ျားတေမှာ မနက်ပိုင်း မှန်ရှေ့မှာ ဖြုန်းနေဖို့ အချိန် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေးနဲ့ အချိန် သိပ်မကုန်ပဲ သင့်ရဲ့ ပုံစံကို ပို စတိုင်ကျသွားစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် သင်လိုက်လုပ်မှာပါလား?? ဒီအောက်မှာတော့ အဲဒီလို နည်းလမ်းလေး ၁၀ ခုကို ရေးပြထားပါတယ်။ SKB များ ဖြစ်ကြပါစေ။
၁. အဝတ်ဟောင်းတွေ မသုံးပါနဲ့တော့
အရည်အသွေးမြင့် ပိတ်စတွေဟာ ကြာရှည်ခံပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဝတ်တတ်ကြတဲ့ ပုံမှန်အဝတ်တွေကတော့ ကြာရှည်မခံပါဘူး။ ရိပြီး ပြဲနေ၊ အရောင်လွင့်နေတဲ့ အဝတ်တွေကို ဝတ်တာ မလန်းပါဘူး။ ၁ ထည် ၂ ထည် အိမ်နေရင်းဝတ်ဖို့ ချန်ထားပြီး ကျန်တာတွေကို လိုအပ်တဲ့နေရာပေးပစ်လိုက်ပါ။
၂. အမွှေးအမျှင် ရိတ်ပါ
မျက်နှာ အမွှေးအမျှင် ရိတ်တာဟာ သင့်ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါကို တောက်ပလာစေနိုင်ပြီး လိုအပ်တာကတော့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားတစ်ချောင်းနဲ့ Shaving Gel နည်းနည်းပါ။ မုတ်ဆိတ်ထားရင်လဲ သေသေချာချာ တိတိရိရိ ပုံသွင်းထားပါ။ မုတ်ဆိတ်ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်နေသူထက် ဘယ်သူမှ ကြည့်ရမဆိုးပါဘူး။
ဆံပင်လိမ်းဆီ ( Gel, Wax, ခေါင်းလိမ်းဆီ ) ဘယ်ဟာမဆိုဟာ သင့်ဆံပင်ကို လောလောလတ်လတ် ညှပ်ထားသလို ပုံကျကျ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်နဲ့ လိုက်တဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီပုံစံကို သေချာလေ့လာပြီး သုံးစွဲပါ။ ခေါင်းလဲ ဖြီးပါ။
၄. ဖိနပ်ကောင်းကောင်း တစ်ရန် ဝယ်ပါ
ဖိနပ်စုတ်တွေဟာ ဝတ်စုံကောင်းတစ်ခုကို ဖျက်စီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိနပ်စုတ်တွေက စီးရတာ ပိုပြီး သက်တောင့်သက်တာရှိတယ်ထင်ရင် ပုံစံလဲကောင်း၊ စီးလို့လဲ အဆင်ပြေတဲ့ ဖိနပ်တွေရှိတာ သိထားပါ။ Dress Shoe တစ်စုံလောက်ဆိုရင် နေရာတိုင်း စီးနိုင်ပြီး စတိုင်လဲ ကျပါတယ်။
၅. သင်နဲ့ တကယ်တန်တဲ့ ဝတ်စုံကိုပဲ ရှာဝတ်ပါ
အသင့်ချုပ်ပြီး ဝတ်စုံတံဆိပ်တော်တော်များများမှာ သင်နဲ့ တန်တဲ့ ဆိုဒ် ရှိတတ်ပါတယ်။ ရှာဝယ်ပါ။ ဝတ်စုံ အဟောင်း မတန်တော့တဲ့ဟာတွေဆိုရင်လဲ အပ်ချုပ်ဆရာဆီမှာ သွားပြီး ပြင်လို့ ရပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မတန်တာ မဝတ်ပါနဲ့။
၆. ကျောပိုးအိတ် ကောင်းကောင်း ဝယ်ပါ
အကောင်းဆုံးကတော့ သင့်ရဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကို ပိုပြီး လူကြီးဆန်တဲ့ လက်ဆွဲအိတ် ပြောင်းကိုင်တာပါပဲ။ ဝင်ဆန့်တာခြင်း အတူတူကို ပိုပြီး အဆင့်အတန်းရှိစေပါတယ်။ ကျောပိုးအိတ်မှဆိုရင်တော့ လယ်သာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကင်းဗတ်ကို ဝယ်ပါ။
၇. တခြား လိုတဲ့ ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေ ဖြည့်ပါ
ဘိုးတိုင်လေးတွေ၊ လက်ကိုင်ပုဝါ၊ လက်ပါတ်လေးတွေ အားလုံးဟာ သင့်ရဲ့ ဝတ်စုံဟောင်းကို နည်းနည်း အရောင်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကုန်လုံးကို တစ်ခါထဲ ချမပြလိုက်ပါနဲ့။ နည်းနည်း နည်းနည်းခြင်းစီ တိုးဝတ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
၈. ခြေအိတ်အသစ်လေးတွေ ဝယ်ပါ
ဝတ်စုံတစ်စုံကို ဖိနပ်စုတ်တွေထက် ပိုပြီး ဖျက်စီးနိုင်တာ ခြေအိတ်စုတ်တွေပါပဲ။ အပေါက်ပါတဲ့ ခြေအိတ်တွေကို လွှင့်ပစ်ပါ။ အနံ့ထွက်နေရင် လွှင့်ပစ်ပါ။ ခြေအိတ်အသစ် ဝယ်ဖို့ ပျင်းရိခြင်းဟာ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး ညံ့တာပါပဲ။ ခြေအိတ်အဟောင်းဆိုတာ အတွင်းခံအဟောင်းနဲ့ တူတူပါပဲ။
မျက်မှန်ဆိုတာ သင့်မျက်နှာပုံစံကို အကောင်းဆုံး ပြောင်းနိုင်တဲ့ အရာတွေပါပဲ။ တကယ်လို့ သင်မှာ မျက်မှန်လဲ ရှိပြီးသား ရုပ်လဲ ပြောင်းချင်ရင်တော့ ကိုင်းလဲတပ်လိုက်ပါ။ သင် အထက်တန်းကျောင်းကတည်းက မျက်မှန်ဆိုရင်တော့ လဲသင့်ပါပြီ။ လေးထောင့်ကျကျ မျက်မှန်တွေဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမယ့် သင့်မျက်နှာနဲ့ အလိုက်ဆုံးဟာကို ရှာဝယ်ပါ။
၁၀. အဝတ်အစားတွေကို ဂရုစိုက်ပါ
ဒီဟာက အရေုးကြီးဆုံးပါပဲ။ ဘယ်လောက် ကောင်းတဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဖြစ်ဖြစ် သေချားသိမ်းမထားရင် အလကားပါပဲ။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း အမြဲလျှော်တာ၊ Dry Cleaner တွေဆီ မကြာခဏသွားတာ မျိုးပါ။ မီးပူ အမြန် ထိုးလိုက်ခြင်းဟာ ဘယ်ဝတ်စုံကိုမဆို ပိုသန့်သွားသလို မြင်ရစေပါတယ်။
ကြည့်ကောင်းဖို့ဆိုတာ အရမ်း မခက်ပါဘူး။ အားနည်းနည်း စိုက်ရရုံလေးပါ။
ယောကျြားပီသခငျြသူတှအေတှကျ Fashion အကွံဉာဏျလေးမြား
ဒီအဝတျအစား၊ ဒီဆံပငျခညျြး နတေို့ငျးမွငျနရေရငျ သငျ့ပုံစံဟာ ပငျြးစရာ ကောငျးလာမှာပါ။ အဲဒီအခြိနျမှာ တခွားတဈကောငျက နညျးနညျး တောကျတောကျပပ ဝတျစားလာရငျ ကောငျမလေးတှအေားလုံးက သူ့ကိုပဲ အရေးပေးမှာပေါ့။ အဲလိုကွုံရလို့ မခံခြိမခံသာ ဖွဈဖူးပါသလား။
ယောကျြားတမှော မနကျပိုငျး မှနျရှမှေ့ာ ဖွုနျးနဖေို့ အခြိနျ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ငှကွေေးနဲ့ အခြိနျ သိပျမကုနျပဲ သငျ့ရဲ့ ပုံစံကို ပို စတိုငျကသြှားစမေယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိတယျဆိုရငျ သငျလိုကျလုပျမှာပါလား?? ဒီအောကျမှာတော့ အဲဒီလို နညျးလမျးလေး ၁၀ ခုကို ရေးပွထားပါတယျ။ SKB မြား ဖွဈကွပါစေ။
၁. အဝတျဟောငျးတှေ မသုံးပါနဲ့တော့
အရညျအသှေးမွငျ့ ပိတျစတှဟော ကွာရှညျခံပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ဝတျတတျကွတဲ့ ပုံမှနျအဝတျတှကေတော့ ကွာရှညျမခံပါဘူး။ ရိပွီး ပွဲနေ၊ အရောငျလှငျ့နတေဲ့ အဝတျတှကေို ဝတျတာ မလနျးပါဘူး။ ၁ ထညျ ၂ ထညျ အိမျနရေငျးဝတျဖို့ ခနျြထားပွီး ကနျြတာတှကေို လိုအပျတဲ့နရောပေးပဈလိုကျပါ။
၂. အမှေးအမြှငျ ရိတျပါ
မကျြနှာ အမှေးအမြှငျ ရိတျတာဟာ သငျ့ကိုယျရောငျကိုယျဝါကို တောကျပလာစနေိုငျပွီး လိုအပျတာကတော့ မုတျဆိတျရိတျဓားတဈခြောငျးနဲ့ Shaving Gel နညျးနညျးပါ။ မုတျဆိတျထားရငျလဲ သသေခြောခြာ တိတိရိရိ ပုံသှငျးထားပါ။ မုတျဆိတျထိုးထိုးထောငျထောငျထှကျနသေူထကျ ဘယျသူမှ ကွညျ့ရမဆိုးပါဘူး။
ဆံပငျလိမျးဆီ ( Gel, Wax, ခေါငျးလိမျးဆီ ) ဘယျဟာမဆိုဟာ သငျ့ဆံပငျကို လောလောလတျလတျ ညှပျထားသလို ပုံကကြ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ သငျနဲ့ လိုကျတဲ့ ခေါငျးလိမျးဆီပုံစံကို သခြောလလေ့ာပွီး သုံးစှဲပါ။ ခေါငျးလဲ ဖွီးပါ။
၄. ဖိနပျကောငျးကောငျး တဈရနျ ဝယျပါ
ဖိနပျစုတျတှဟော ဝတျစုံကောငျးတဈခုကို ဖကျြစီးပဈနိုငျပါတယျ။ ဖိနပျစုတျတှကေ စီးရတာ ပိုပွီး သကျတောငျ့သကျတာရှိတယျထငျရငျ ပုံစံလဲကောငျး၊ စီးလို့လဲ အဆငျပွတေဲ့ ဖိနပျတှရှေိတာ သိထားပါ။ Dress Shoe တဈစုံလောကျဆိုရငျ နရောတိုငျး စီးနိုငျပွီး စတိုငျလဲ ကပြါတယျ။
၅. သငျနဲ့ တကယျတနျတဲ့ ဝတျစုံကိုပဲ ရှာဝတျပါ
အသငျ့ခြုပျပွီး ဝတျစုံတံဆိပျတျောတျောမြားမြားမှာ သငျနဲ့ တနျတဲ့ ဆိုဒျ ရှိတတျပါတယျ။ ရှာဝယျပါ။ ဝတျစုံ အဟောငျး မတနျတော့တဲ့ဟာတှဆေိုရငျလဲ အပျခြုပျဆရာဆီမှာ သှားပွီး ပွငျလို့ ရပါတယျ။ ဘယျတော့မှ မတနျတာ မဝတျပါနဲ့။
၆. ကြောပိုးအိတျ ကောငျးကောငျး ဝယျပါ
အကောငျးဆုံးကတော့ သငျ့ရဲ့ ကြောပိုးအိတျကို ပိုပွီး လူကွီးဆနျတဲ့ လကျဆှဲအိတျ ပွောငျးကိုငျတာပါပဲ။ ဝငျဆနျ့တာခွငျး အတူတူကို ပိုပွီး အဆငျ့အတနျးရှိစပေါတယျ။ ကြောပိုးအိတျမှဆိုရငျတော့ လယျသာ၊ ဒါမှမဟုတျ ကငျးဗတျကို ဝယျပါ။
၇. တခွား လိုတဲ့ ပစ်စညျးသေးသေးလေးတှေ ဖွညျ့ပါ
ဘိုးတိုငျလေးတှေ၊ လကျကိုငျပုဝါ၊ လကျပါတျလေးတှေ အားလုံးဟာ သငျ့ရဲ့ ဝတျစုံဟောငျးကို နညျးနညျး အရောငျတငျပေးနိုငျပါတယျ။ အကုနျလုံးကို တဈခါထဲ ခမြပွလိုကျပါနဲ့။ နညျးနညျး နညျးနညျးခွငျးစီ တိုးဝတျတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
၈. ခွအေိတျအသဈလေးတှေ ဝယျပါ
ဝတျစုံတဈစုံကို ဖိနပျစုတျတှထေကျ ပိုပွီး ဖကျြစီးနိုငျတာ ခွအေိတျစုတျတှပေါပဲ။ အပေါကျပါတဲ့ ခွအေိတျတှကေို လှငျ့ပဈပါ။ အနံ့ထှကျနရေငျ လှငျ့ပဈပါ။ ခွအေိတျအသဈ ဝယျဖို့ ပငျြးရိခွငျးဟာ တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေး ညံ့တာပါပဲ။ ခွအေိတျအဟောငျးဆိုတာ အတှငျးခံအဟောငျးနဲ့ တူတူပါပဲ။
မကျြမှနျဆိုတာ သငျ့မကျြနှာပုံစံကို အကောငျးဆုံး ပွောငျးနိုငျတဲ့ အရာတှပေါပဲ။ တကယျလို့ သငျမှာ မကျြမှနျလဲ ရှိပွီးသား ရုပျလဲ ပွောငျးခငျြရငျတော့ ကိုငျးလဲတပျလိုကျပါ။ သငျ အထကျတနျးကြောငျးကတညျးက မကျြမှနျဆိုရငျတော့ လဲသငျ့ပါပွီ။ လေးထောငျ့ကကြ မကျြမှနျတှဟော အကောငျးဆုံးဖွဈပမေယျ့ သငျ့မကျြနှာနဲ့ အလိုကျဆုံးဟာကို ရှာဝယျပါ။
၁၀. အဝတျအစားတှကေို ဂရုစိုကျပါ
ဒီဟာက အရေုးကွီးဆုံးပါပဲ။ ဘယျလောကျ ကောငျးတဲ့ အဝတျအစားတှေ ဖွဈဖွဈ သခြေားသိမျးမထားရငျ အလကားပါပဲ။ သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျး အမွဲလြှျောတာ၊ Dry Cleaner တှဆေီ မကွာခဏသှားတာ မြိုးပါ။ မီးပူ အမွနျ ထိုးလိုကျခွငျးဟာ ဘယျဝတျစုံကိုမဆို ပိုသနျ့သှားသလို မွငျရစပေါတယျ။
ကွညျ့ကောငျးဖို့ဆိုတာ အရမျး မခကျပါဘူး။ အားနညျးနညျး စိုကျရရုံလေးပါ။
Previous: လိင်ဆက်ဆံလိုစိတ်ကို ဘယ်လို ထိန်းရမလဲ??
Next: ချုံကြားမှ ဘုံဖျားသို့ တက်လှမ်းလာခဲ့သည့် ဘီလျံနာများ